Izitayile zethu ze-Bangs ezithandwayo zamadoda | Amadoda aQinisekileyo
Iinwele ezilungileyo kakhulu ezinee-bangs zamadoda
Ukuba ubucebe ukufudukela kwiinwele ngee-bangs, eli lixesha elifanelekileyo. I-bangs yamadoda iya ihambelana kakhulu, kokubini kwiikhathalogu nakwisitrato.
Kusasele iinyanga ezisixhenxe ezinde kude kufike ihlobo- ixesha apho kungangonwabi kwaphela ukunxiba ii-bangs ezinobungqingili-, ngaphezulu kwexesha elaneleyo khulisa iinwele zakho kwaye uzame ezinye zezi zinwele ezinesitayile.
1 Bangs ecaleni
2 Ukugqabhuka ngamandla
3 I-bangs ethe tye
4 Ibhanti emfutshane
Ekhethiweyo Homme SS16
Amacala e-bangs abonelela ngevolumu eyongezelelweyo ngaphezulu, ngakumbi ukuba songeza isiphumo sendalo. Amanye amaza kwiingcebiso kunye nobude obusondeleyo okanye obungaphezulu komda wokhangelo zizitshixo zokwenza ukuba kupholile.
UDavid Hart SS16
Ukulungiswa kweGucci ngo-2016
Ukuba iinwele zakho zi-wavy, olu hlobo lwezinwele ngee-bangs lukhetho oluhle kakhulu. Inqanaba lokugcina alikho phezulu kakhulu kwaye linokukunceda ujonge iminyaka embalwa encinci, ukuba yile nto uyifunayo. Emacaleni ungayinxiba zombini imfutshane kwaye inde, kodwa khumbula ukuba ungayilinganisi kunye neemveliso ukuze igcine intshukumo yendalo.
I-bangs ethe tye
Ulutsha lwasekhaya SS16
Tsala kunye neBhere ngo-2016
Ukulungiswa kweTopman ngo-2016
Iklasikhi phakathi kwezakudala, ii-bangs ezithe tye zinamancedo afanayo nalawo ajikelezayo. Ezi zezona zinwele zilungileyo unokuzifumana ngoku ukuba unolu hlobo lweenwele.
UTopman Oku kulungele u-2016
Kuba izitshixo azihambi ezantsi embindini webunzi, yeyona ilula ukuyigcina. Bendlela: Kunokuba nzima ukwenza isitayile kwaye akuhambelani wonke umntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Iinwele ezilungileyo kakhulu ezinee-bangs zamadoda
Amadoda kunye nee-chokers, okanye ngokuchasene?
Unxiba njani ngokweKhowudi eMnyama yomnyama